Hooyo Sheltie ah
Kuwa kale Xayawaanka
Shepherd Scottish wuxuu ku yaal liiska ugu quruxda badan, quruxda badan, eek u nool. Eegitaanka eeyaha waxaa saameeyay cimilada adag, cimilada adag ee Scotland, taas oo sameysey jaakad dheer oo qaro leh oo gaaban taas oo si hufan u ilaalin lahayd eyga oo saameyn ku leh heerkulka hooseeya. Waxaa jira fikrad ah in noocii hore ee eeyaha idaha ah ee caanahan la dhex mariyey degeyada iyo greyhounds, taas oo ay u egyihiin eeyaha ku daboolay muuqaalkooda waxayna noqdeen kuwo deg deg ah.
Maraakiibta Scottish-ka ah waxaa mararka qaarkood la yiraahdaa - Sheltie, tixraacan adigoo u eeyaha eyga. Waqtiyadii hore, xoolaha xoolaha Scottish ah ayaa si guul leh u caleemo saartay eeyaha eyda daaqsinka ah.
Caanaha lo'da ee Scotland waxaa laga soo dhoofiyey Iceland iyo inkasta oo cimilada caanka ah ee Scottish, ay si fiican u qaadatay xidid. Tani waxay eeyada eydoo si fiican u qabatay hawshii ay ku lahayd idaha daaqsinta, eeyooyinka ayaa fududeeyay shaqada adhijirada iyaga oo si guul ah u garaacaya idaha ka soo laabtay lo'da. Inta badan waxaa loo yaqaan 'collie', halka kan dambe uu yahay ilmo madaxbannaan oo eeyaha ah, inkastoo xilliyadaas ay labadaba labaduba muujiyeen naftooda sida eyda eeyga ugu fiican. Isku duubnaanta xajmigoodu way ka duwan yihiin hoyga, waxay aad u badan yihiin, iyo eeyaha Scottishka xitaa waxay jecel yihiin naanaysta "Pony Scottish."
Sidii ilmo gaar ah, Shepherd Dog Dog waxaa loo aqoonsaday 1860 at the Show Show, oo sanad walba lagu qabtay Scotland. Illaa iyo hadda, dadka curyaamiinta ah iyo takhaatiirta sayniska ayaa si guul leh ugu guulaystay inay haystaan ​​Shepherds Scottish leh sifooyinka wanaagsan ee maskaxeed iyo muuqaal la aqbali karo.
Qaababka ugu muhiimsan
Wareegtu waxay leedahay cidhiidhi ah, madax dheer, marka la barbardhigo idaha woxoogaa kale waa mid aad u caqli badan. Qaniinyada eeyaha ah ee noocaan ah waa maqaar-qaabeeya, oo leh xoog xoog leh, xoog leh, laakiin ilkaha yaryar. Lipsadu waa mid adag, midab madow. Dareemka hoose wuxuu daboolayaa farinta sare. Dareemka hoose wuxuu u dhow yahay daanka.
Caanaha ayaa si adag u habeeyay indhaha. Indhuhu waxay leeyihiin qaab digir ah. Indhaha intooda badani waa midabka madow, mararka qaarkoodna midab madow. Baaxadda isha ayaa inta badan saamigeedu le'eg yahay xajmiga dhakada.
Dhegaha caleemaha waxay ku yar yihiin cabbirka, oo u eg qaab saddexagal ah. Dheguhu waa inuu ku jiraa meel taagan, talooyinka dhagaha waa in la yareeyaa hore, laakiin waa inaysan ku haboonayn qulqulka.
Caanuhu waxay leeyihiin qoqo adag, qoorta murqaha, si habsami leh u gudubta. Naaska ayaa la horumariyaa, qoto dheer, dhexdhexaad ah. Qadka naaska waxaa la dhigayaa heerka isgoysyada hoose ee hoose. Caanuhu wuxuu leeyahay caloosha oo si wanaagsan loo ruxay. Qudheelladu si fiican ayay u korodhay, sare. Dhabarku waa mid xoog leh, toosan oo leh jilicsanaan iyo boodbood gaaban, oo si tartiib tartiib ah u noqda koox caan ah oo dhexdhexaad ah.
Calaamadaha, marka la eego dhinaca hore, waa is barbar socda. Xumaduhu waxay sameeyaan xagal 120 ° ah. Maqaaradaha Oval ayaa xiray faraha, toosan qoryaha, tilmaamaya cirridka, xoogaa jilicsan, aan caadi ahayn. Lugaha jilbaha, marka laga eego dhinaca dambe, ayaa isu barbar dhigi kara isla markaana si toos ah u eeg. Daboolka Shetland waa murqo, si fiican ayaa loo horumariyey.
Daboolku wuxuu gaaraa jibbaar, oo u eg qaabka muraayadda. Marka eeygu is dejiyaan, dabada ayaa hoos loo dhigaa, laakiin waxay u qalantaa eeyga farxadeed ee eyda, sida daboolka kor u kaca dhabarka, laakiin ma dhaco.
Timaha dhogorta leh ee dhogorta leh. Timaha ugu dheeraa waxay ku koraan qoorta, dushooda, dhabannada. On croup ah dhogorta waa ugu adag. Qeybaha dambe ee miskaha ayaa ah jilicsan iyo timo dhaadheer, oo sameysma "surwaal". On the masagada, addimada hore, dhabannada, timaha gaaban, si adag u xiran jirka ah.
Midabka caanuhu waa inta badan madow-caleemo ama jaalle-piebald, iyo, guud ahaan, midabka noocaan ah wuxuu u kala duwanyahay noocyo kala duwan. Waxaa jira eeyyo leh midab leh saddex midab oo leh khad cad oo madaxa ah iyo qaab. Daboolka waa caddaan iyo ballaadhan, wuxuu gaaraa garbaha, ka dibna wuxuu u gudbaa laabta iyo addimada cad. Sanku mar walba madow. Daboolku wuxuu leeyahay af cad. Waxaad la kulmi kartaa wakiil ka mid ah ilmagaleenka oo leh caddaan ah caddaan (75% ama ka badan) oo leh istaroog ah midab mugdi ah indhaha. Mararka qaarkood dhogorta waxay noqon kartaa midabka marble-piego midabka, idaha-eeyaha midabada noocan oo kale ah suuqa casriga casriga ah waa qaali.
Xayawaanka Sheltie wuxuu leeyahay muuqaal qurux badan, deganaan, dabeecad nabadeed, jilicsan, oo u oggolaanaya in caruur la dhalo carruurta yaryar, sidaas daraadeed waxay ku guulaysatay jacayl nafteeda. Eeyada ilmanimadani waa mid u gooni ah oo jacayl leh, waxay aad u jecel yihiin caruurta. Shepherds Scottish waxaa lagu gartaa maskaxyo fiiqan, heer sare ah oo lagu kalsoonaan karo. Wakiilada caanuhu waa kuwa caqli badan, dareenkooda mar walba waxay diirada saaraan walxaha iyaga xiisaha u leh, taasina waa sababta ey ey noqdeen ey adhijir. Bariga Bariga Dhamaadka xilligan, wakiillada noocaan ah waxaa loo isticmaalaa sida adhijirrada guntiga lagu arkay. Noocyada kale ee idaha ayaa aan la qabsan karin deerka sababtoo ah taxaddar iyo cabsi.
Sheltie waa jinsi oo si ammaan ah u adkeyn kara goob dabaq ah, laakiin xaalada socodka joogtada ah ee hawada cusub. Shepherd Scottish ee daryeelka iyo cunista ma aha mid ficil ahaan. Si kastaba ha noqotee, qubeyska joogtada ah iyo isku-dhafka eeygu wuxuu timaha ka dhigi doonaa mid faro badan.
Nuujiyo iyo shaqeyn
Xoogga galmo ee eyga idaha waa la gaarey ka dib laba sano ka dib, ragga way koraan xoogaa ka dambeeya qashinka. Daawooyinka ayaa lagula talinayaa in lagu tababaro da 'yar, maaddaama ay wax walba ku qabtaan duulimaadka, si sahal ahna ugu qancin karaan tababarka. Ha ku qasbin ama ha ku qasbin ilmaha in ay sameeyaan amarro, iyo inta lagu jiro tababbarka aadan ku qaylin karin eeyaha.
Tababbar fiican Shepherd Scottish wuxuu noqon karaa eey ilaaliya, inkasta oo ay ka hooseysaa qaar ka mid ah noocyada rasmiga ah (eeyaha loogu talagalay waajibaadka ilaalinta).
Miisaanka iyo cabbirka
Kobaca ee celceliska Shepherds Scottish. Dumarka qashinka - 33-38 sentimitir, dheddig - 30-35.5 sentimitir. Maydhayaasha Scottishku waxay leeyihiin suuf farabadan sababtoo ah waxa ay u muuqdaan kuwo weyn. Miisaanka wakiilada caanaha waa kala duwan yahay 8-11 kg. Miisaanka Sheltie wuxuu had iyo jeer ujiraa heerka cabbirka jirka.
Sidee si aad u sameysid aariir ah gacmahaaga
Miyaan u baahanahay xayawaan caruurtayda?
Noocyada ugu caansan eeyaha
Sida loo daryeelo chinchillas
Sababaha timaha lumis
Daryeelka guriga ee bisadaha, eyda iyo xayawaanka kale
Jaantuska gardarrada eeyga ilmaha
Caadooyinka Sanadka Cusub ee Dalal kala duwan
Mar labaad guursaday: qoraalka labaad ee arooska
Naagta waa in ay daryeelaa ninkeeda
Cake kareemka, oo lagu qurxiyo jilicsan
Waa noocee muraayadaha jikada si ay u doortaan?
Wax walba oo haween ah: quruxda, caafimaadka
Qalabka cuntada lagu cuno
Salad ee digirta cagaaran, yaanyada iyo karootada
Miyuu saaxiibtinimo ku yahay khuraafaad ama xaqiiq ah?
Fly-Lady - nadiifinta haween casri ah
Star of Alyona Apina oo 90 jir ah ayaa furi doonta ninkeeda kadib 25 sano oo guur ah
Xanuunka dhanjafka ah ee la xanibay Ka takhalus quudinta adoo adeegsanaya cunto cunid
Asparagus digo leh yaanyada suugada
Tatyana Peltzer, biography
Ku dhaji dheriga - dheef-shiideedka Suxuunta Cusub
Ma doonayo inaan guursado, sida looga hortago cadaadiska qoyska?
Nolosha ka dib marka laga saaro ilmo-galeenka